Faritra arovana : nihena 40% ny ala potika | NewsMada
Faritra arovana : nihena 40% ny ala potika
Nametrahana fitaovam-pitiliana an’habakabaka any amin’ny faritra arovana enina eto Madagasikara, hanampy ny mpisafo ala. Nanaovana izany ny valan-javaboahary Kirindy-Mite, Tsimanampetsotsa, ny tahirin-javaboahary manokana Andranomena ary ny faritra arovana vaovao Amoron’ny Onilahy, Ankodida ary Ifotaky Avaratra.
Araka ny tatitra navoakan’ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana, WWF, ny 4 mey teo, nihena 40% ny salanisan’ny fanapotehana ny ala ny taona 2012 hatramin’ny 2016.
Nanatontosa ny tetikasa fanaraha-maso an’habakabaka ny WWF, niara-niombon’antoka tamin’ny Rafitra misahana ny faritra arovana (SAP), ny Aviation sans frontières ary ny Madagascar national park (MNP). Nanomboka ny taona 2006 ny asa, hampihenana ny fanapotehana ny ala, hanentanana ny mponina eny ifotony manodidina ny faritra arovana. Naharesy lahatra azy ireo ny nahitana avy hatrany ny kisarin’ny ala potika, rehefa naseho azy ireo mivantana. Tsapany avy hatrany koa fa anisan’ny tompon’antoka amin’ny fanimbana ny ala mivantana ny mponina eny ifotony, miampy ny olom-bitsy toy ny mpitrandraka tsy ara-dalàna ny ala, ohatra.
Nahatratra 88 ny sidina an’habakabaka natao nanomboka ny taona 2010, tamin’ny faritra arovana miisa 21 eto Madagasikara, ka anisan’izany ny any amin’ny alan’i Ranobe, Mikea ary Zamasy. Mifameno amin’ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisana informatika, ny logiciel Lem/smart ny tetikasa fanaraha-maso an’habakabaka. Entina hanaraha-maso ny fanapotehana ny ala sy hamaritana ny fomba hampiharana ny lalàna manan-kery amin’ny tsy fanarahan-dalàna ity fitaovana ity.
Nidina ho 3.450 ha raha 1.166 ha tany Kirindy-Mite (-66%), lasa 46,3 ha raha 8,46 ha (-81%) tany Tsimanampetsotsa, lasa 142,75 ha raha 53,74 ha (-62%) tany Andranomena, lasa69,31 ha raha 41,03 ha (-40%) tany Amoron’ny Onilahy, lasa 12,16 ha raha 2,72 ha (-77%) tany Ankodida, lasa 100,63 ha raha 51,58 ha (-48%) tany Ifotaky Avaratra.